Mukati memakore gumi, lithium iron phosphate inotsiva lithiamu manganese cobalt oxide semakemikari emagetsi ekuchengetedza magetsi?
Nhanganyaya: Chirevo chakaitwa naWood Mackenzie inofungidzira kuti mukati memakore gumi, lithium iron phosphate ichatsiva lithium manganese cobalt oxide senzvimbo huru yekuchengetedza magetsi kemisitiri. Tesla ...
Nei achifunga LiFePO4 ichave yakakosha kemikari yenguva yemberi?
Nhanganyaya: Catherine von Berg, CEO weCalifornia Battery Company, akakurukura chikonzero nei achifunga kuti lithium iron phosphate ichave yakakosha kemikari mune ramangwana. Muongorori weUS Wood Mackenzie akafungidzira svondo rapfuura kuti na2030, lithium iron phos ...
Kupinda muna Chikunguru 2020, iyo CATL lithium iron phosphate bhatiri yakatanga kupa Tesla; panguva imwechete, BYD Han yakanyorwa, uye bhatiri rakagadzirwa ne lithiamu iron phosphate; kunyangwe GOTION YEMAHARA-TECH, nhamba yakakura yekutsigira Wuling Hongguang ichangoshandiswa is al ...
Iyo LIAO Inogonesa Simba Rinofambisa LiFePO4 bhatiri-LAF12V30Ah yakapihwa
Munguva pfupi yapfuura, takanzwa nhau dzinofadza kubva kuEurope zviuru zvemakiromita kure. Pane karavhani inofambisa bhatiri kuita nhangemutange yakachengetwa neANWB (Dutch Bicycle Master Association), iyo LIAO Inogonesa Simba Rinofambisa LiFePO4 bhatiri-LAF12V30Ah yakagadzirwa nekambani yedu inorova ese gumi nemakwikwi ...
Kuedza Kwakabatana Kukunda Pamusoro Pekutambudzika
Denda re COVID-19 rave kuita misoro yepasi rose. Kunge makambani mazhinji muChina, tiri kusangana nematambudziko akakura mukumhanyisa mitsara yekugadzira nekuendesa zvigadzirwa zvedu. Ichitarisana nekutengeserana kwepasi rese, LIAO Technology inokurudzira kudyidzana kwebhizimusi nechae ...
Yunivhesiti-bhizinesi rekudyidzana kuvhura mhemberero
Mhemberero yekusaina yeyunivhesiti-yekudyidzana kushandira pamwe uye kudzidzisa tsika hwaro pakati pesangano rezvinhu sainzi neinjiniya, zhejiang yunivhesiti nekambani yedu, yakaitirwa kuvhurwa kukuru mukambani medu. Idanho rakakura kuvhura chitsauko chitsva che ...